Tolle Malen Nach Zahlen - Natur - Kostenlose Ausmalbilder
Sary hosodoko isa - natiora
Ny môdely hoso-doko amin'ny isa dia afaka mandrisika ny ankizy hoso-doko voalohany amin'ny endrika milay ho an'ny ankizy. Ny ankizy dia miloko fotsiny amin'ny saha misy isa miaraka amin'ilay loko nomeny. Noho izany dia mihena ny tokonam-bidy voalohany hanombohana ny fandokoana.
Ary ny motif dia fanahy iniana natao ho an'ny ankizy kely kokoa. Tsindrio ny sary hanokafana môdely PDF ho an'ny fanontana:
Doko amin'ny isa amoron-dranomasina
Mandoko amin'ny isa miaraka amin'ny zaridaina
Doko amin'ny alàlan'ny afon-dasy
Lokon-tsarimihetsika isa - Noely
Mandoko amin'ny sambo isa
Lokon'ilay lolo lolo
Doko araka ny fahitana isa